Linux Mint 20.1/20.2/20.3 တွင် XanMod Kernel ကို ထည့်သွင်းပါ - LinuxCapable
Linux Mint 20.1/20.2/20.3 တွင် XanMod Kernel ကို ထည့်သွင်းပါ။
စနေနေ့, ဇန်နဝါရီလ 22, 2022 သောကြာနေ့, နိုဝင်ဘာလ 19, 2021 by ယောရှုယာကုပ်
XanMod Repository ကိုတင်သွင်းပါ။
XanMod Linux Kernel ကို ထည့်သွင်းပါ။
XanMod Linux Kernel ကို ဘယ်လို Update လုပ်မလဲ။
XanMod Linux Kernel ကို ဖယ်ရှားနည်း
XanMod Linux Mint 20 ပါသော stock kernel ၏ အခမဲ့၊ open-source ယေဘုယျရည်ရွယ်ချက် Linux Kernel တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် စိတ်ကြိုက်ဆက်တင်များနှင့် အင်္ဂါရပ်သစ်များပါ၀င်ပြီး အထူးသဖြင့် ဟာ့ဒ်ဝဲအသစ်များအတွက် တုံ့ပြန်မှုရှိပြီး ချောမွေ့သော desktop အတွေ့အကြုံကို ပေးစွမ်းရန်အတွက် တည်ဆောက်ထားသည်။ XanMod သည် Linux Gaming၊ streaming နှင့် အလွန်နိမ့်သော latency လိုအပ်ချက်များကြားတွင် ရေပန်းစားပြီး တည်ငြိမ်သော၊ edge နှင့် development တို့မှ ရွေးချယ်ရန် အကိုင်းအခက်များစွာပါရှိသော နောက်ဆုံးပေါ် Linux Kernels များကို မကြာခဏကြွားလုံးထုတ်လေ့ရှိသည်။
မထည့်သွင်းမီ XanMod Kernel ဆိုင်ရာ နောက်ထပ်အချက်အလက်များအတွက်၊ XanMod Kernel အင်္ဂါရပ်အချက်အလက် စာမျက်နှာသို့ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပါ။
XanMod သည် x86_64 ကိုသာ ပံ့ပိုးသည်။ processor တည်ဆောက်ပုံ.
အောက်ပါ Tutorial တွင် သင်လေ့လာနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ XanMod repository ကို မည်သို့တင်သွင်းပြီး သင်၏ Linux Mint 20.xx လည်ပတ်မှုစနစ်တွင် နောက်ဆုံးပေါ် Linux Kernel ကို ထည့်သွင်းနည်း။
အကြံပြုထားသော OS- Linux Mint 20 နှင့်အထက်။
သုံးစွဲသူအကောင့်: အသုံးပြုသူအကောင့်နှင့်အတူ sudo or root access ။
သင့်ရဲ့ဒိတ်လုပ်ပါ Linux Mint လက်ရှိ ပက်ကေ့ဂျ်များ အားလုံးကို ခေတ်မီကြောင်း သေချာစေရန် လည်ပတ်မှုစနစ်
ရှိပြီးသား သို့မဟုတ် sudo အကောင့်အသစ်ကို စနစ်ထည့်သွင်းရန်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ သင်ခန်းစာတွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပါ။ Linux Mint တွင် Sudoers သို့ အသုံးပြုသူတစ်ဦးကို ထည့်ခြင်း။.
သင်ခန်းစာသည် terminal ကိုအသုံးပြုမည်ဖြစ်ပြီး၊ မသိသေးသူများအတွက်၊ ၎င်းကို သင်၏ရှိုးအက်ပ်များမီနူးတွင် တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။
ပထမတာဝန်မှာ XanMod repository ကိုတင်သွင်းရန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းကို နည်းလမ်းများစွာဖြင့် လုပ်ဆောင်နိုင်သော်လည်း သင်ခန်းစာသည် အရာများကို ရိုးရှင်းစေရန် apt package manager ၏ terminal ကို အသုံးပြုမည်ဖြစ်သည်။
ပထမဦးစွာ အောက်ပါ command ကိုအသုံးပြု၍ repository ကိုတင်သွင်းပါ။
grep အမိန့်ကို အသုံးပြု၍ လုပ်ဆောင်ခဲ့သည့် အမိန့်ကို အတည်ပြုပါ။
repository ကို အောင်မြင်စွာ တင်သွင်းခြင်းဖြင့်၊ နောက်တာဝန်မှာ အောက်ပါ command ကို အသုံးပြု၍ GPG key ကို တင်သွင်းရန် ဖြစ်သည်။
ထို့နောက် အသစ်ထပ်မံဖြည့်စွက်ခြင်းအား ရောင်ပြန်ဟပ်ရန် သင်၏ APT သိုလှောင်မှုရင်းမြစ်စာရင်းကို အပ်ဒိတ်လုပ်ပါ။
သိုလှောင်မှုတွင် ပုံမှန်အားဖြင့် သင်သတိပြုမိထားသည့်အတိုင်း မှီခိုမှုများအတွက် ထည့်သွင်းပြီးသော ပက်ကေ့ခ်ျအသစ်များ ရှိသည်။
ဆက်မလုပ်ခင်၊ run လိုက်ပါ။ apt upgrade ကွန်မန်းd.
XanMod repository ကို ထည့်သွင်းပြီး နောက်ဆုံးပေါ်အနေဖြင့်၊ သင်သည် XanMod မှ Linux kernel ကို ထည့်သွင်းနိုင်သည်။
ကျူတိုရီရယ်စတင်ခြင်းတွင် ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း ရွေးချယ်ရန် အခက်သုံးမျိုးရှိသည်။ သင်ကြားပို့ချချိန်တွင် Stable သည် ဗားရှင်း 5.14 ရှိပြီး အစွန်းတွင် နောက်ဆုံးထွက်တည်ငြိမ်သော 5.15 ရှိပြီး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသည် Linux Kernel 5.15 kernel တွင် နောက်ဆုံးပေါ် မတည်မငြိမ်ဖြစ်နေသည်။
သင်ခန်းစာသည် သုံးခုစလုံးကို တပ်ဆင်ခြင်းထက် ကျော်လွန်သွားလိမ့်မည်ဖြစ်သော်လည်း၊ သင်ဘာလုပ်နေသည်ကို သင်မသိပါက တည်ငြိမ်ပြီး အနားသတ်ကို မှီဝဲရန် အကြံပြုထားသည်။
XanMod Stable ကိုထည့်သွင်းရန်-
XanMod edge ကိုထည့်သွင်းရန်-
XanMod ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို ထည့်သွင်းရန်-
ဥပမာ (အစွန်း) မှ ထွက်ချက်-
ရွေးချယ်ထားသော repository Linux kernel ကို ထည့်သွင်းပြီးသည်နှင့်၊ တပ်ဆင်မှုကို အပြီးသတ်ရန် သင့်စနစ်အား ပြန်လည်စတင်ရန် လိုအပ်မည်ဖြစ်သည်။
သင့်စနစ်သို့ ပြန်ရောက်ပြီးသည်နှင့် တပ်ဆင်မှုကို အတည်ပြုပါ။
သင်ခန်းစာသင်ကြားချိန်တွင်၊ edge branch တွင် Linux kernel 5.15.2 ပါရှိသည်။
ဒါမှမဟုတ် cat version command ကိုသုံးနိုင်ပါတယ်။
XanMod ဖြင့် သင်ထည့်သွင်းထားသည့် Linux kernel ကို ခေတ်နှင့်မမီစေရန်၊ သင်ခန်းစာတွင်ပြသထားသည့် XanMod ကိုအသုံးပြုပါက သင်ထည့်သွင်းပါက Standard apt update နှင့် upgrade commands များကို လုပ်ဆောင်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
တနည်းအားဖြင့်၊ တည်ငြိမ်သောအသုံးပြုသူများသည် တပ်ဆင်မှုအမိန့်ကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် အစွန်းအထိ အဆင့်မြှင့်နိုင်သည်။ အကောင်းဆုံးကတော့ မကြာခဏ မလဲလှယ်ပါနဲ့။ ဒါက ပြဿနာတွေကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
XanMod ကိုဖယ်ရှားရန်၊ အောက်ပါ command ကိုသုံးပါ။
၎င်းသည် XanMod ဖြစ်နိုင်ပြီး အသုံးမပြုသော မှီခိုမှုများအားလုံးကို လုံးလုံးလျားလျား ဖယ်ရှားပါမည်။
အကောင်းဆုံးကတော့၊ သင်သည် repository ကိုလည်းဖယ်ရှားနိုင်သည်။
တနည်းအားဖြင့် သင်သည် အောက်ပါနှင့်အတူ XanMod အပိုပက်ကေ့ခ်ျများကို ဖယ်ရှားရန် လိုအပ်နိုင်သည်။
ပထမဦးစွာ သင်သည် Linux ပုံနှင့် ခေါင်းစီးပက်ကေ့ဂျ်၏ အမည်အတိအကျကို အသုံးပြုရန် လိုအပ်ပါသည်။ အောက်ပါ command ကို အသုံးပြု၍ ၎င်းကို တွေ့ရှိနိုင်သည်။ dpkg –list အမိန့်.
output တွင်ပြသထားသောအမည်များသည် XanMod Kernel ပါ ၀ င်သောသင်ဖယ်ရှားရန်လိုအပ်သည့်အရာများဖြစ်သည်။
5.15.3 ကို dpkg –list command တွင် ရိုက်နှိပ်ထားသော ဗားရှင်းဖြင့် အစားထိုးရန် မမေ့ပါနှင့်။
သတိပေးချက်၊ သင့်တွင် ရှိပြီးသား Linux Kernel ထည့်သွင်းထားကြောင်း သေချာစေရန် အောက်ပါ command ကို run ပါ။
Linux Mint 20 LTS HWE Kernel ကို စစ်ဆေးရန် သို့မဟုတ် ပြန်လည်ထည့်သွင်းရန်-
စစ်ဆေးရန် သို့မဟုတ် ပြန်လည်ထည့်သွင်းရန် Linux Mint 20 LTS ယေဘူယျ Kernel-
ပုံမှန်အားဖြင့်၊ မူရင်း kernel ကို ထည့်သွင်းသင့်သည်။
နမူနာ အထွက် (HWE Kernel Rollback)-
စစ်ဆေးရန် သို့မဟုတ် လုပ်ဆောင်ရန် ပျက်ကွက်ပါက သင့်စနစ်အား စက်ဖွင့်၍မရဘဲ ခေါင်းကိုက်စေမည်ဖြစ်သည်။
ယခု XanMod ဖယ်ရှားခြင်းကို အပြီးသတ်ရန် သင်၏ PC ကို ပြန်လည်စတင်ပါ။
အထက်ဖော်ပြပါ output တွင်ပြသထားသည့်အတိုင်း၊ သင်သည် Linux Mint 20 ပါရှိသော မူရင်း Linux kernel သို့ ပြန်လှည့်ပြီးဖြစ်သောကြောင့် XanMod ကို သင့်စနစ်မှ အောင်မြင်စွာဖယ်ရှားလိုက်ပါ။
သင်ခန်းစာတွင်၊ Linux Mint 20.xx တွင် XanMod ထည့်သွင်းနည်းကို သင်လေ့လာခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ XanMod သည် နောက်ဆုံးပေါ် ဟာ့ဒ်ဝဲရှိသော ဒက်စ်တော့အသုံးပြုသူများအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော်လည်း ၎င်းကို လက်ရှိအသုံးပြုနိုင်သည့် မည်သည့် Linux Mint desktop တွင်မဆို ထည့်သွင်းနိုင်သည်။ သို့သော်လည်း အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းမပြုမီ သုတေသနပြုလုပ်ရန် အကြံပြုထားပြီး အရေးကြီးသော သို့မဟုတ် ထုတ်လုပ်မှုအမျိုးအစားစနစ်များတွင် ၎င်းကိုအသုံးပြုရန် အကြံပြုထားသည်။
XanMod ကိုအသုံးပြုခြင်း၏အကောင်းဆုံးအင်္ဂါရပ်များထဲမှတစ်ခုမှာနောက်ထပ် Linux Kernel ရောက်ရှိလာသောအခါ၊ ၎င်းသည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု / အနားသတ်တွင်အလွန်လျင်မြန်စွာထည့်သွင်းထားခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်၊ အထူးသဖြင့် သင်သည် Linux ဂိမ်းဆော့လျှင် ကြည့်ရကျိုးနပ်သည်။
ရွာလုိ႔ရသည့္အမ်ဳိးစားမ်ား Linux Mint Tags: Linux kernel, Linux Mint 20, XanMod Kernel post navigation
Linux Mint 3.11 တွင် Python 20 ထည့်သွင်းနည်း